novembre 2018 - Page 2 sur 81 -
Rangahy iray no maty, olona telo votsotra teo am-pelatanan’ireo dahalo naka an-keriny, tany amin’ny distrikan’Anjozorobe. Io no vokatry ny fifandonana nafana nifanaovan’ny tafika sy ny dahalo avy nanatanteraka fanafihana niaro fakana takalon’aina, tany amin’ny fokontany …Tohiny
Fakana an-keriny tany Ankazobe : Vehivavy telo novetavetain’ny jiolahy
Nisesy ny fanafihana mitam-piadiana, indrindra ny halatr’omby miaro fakana an-keriny. Izay nisehoana fanafihan-jiolahy miaro habibiana mahatsiravina indray no niseho, tany amin’ny kaomina Ankazobe, herinandro lasa izay. Nitondra faisana tamin’izany ireo zaza amam-behivavy iharan’ny fakana an-keriny, …Tohiny
Fihinanana ioda : Antoky ny fivelaran’ny atidoha
Mbola ny 21,3 isan-jato ny tokantranon’ny malagasy ihany no mampiasa ny sira misy ioda raha tokony 90 isan-jato izany. Ny olana matahotra ny vahoaka malagasy satria maro ny feo mandeha momba ny fihinana ny sira …Tohiny
Miova tokoa ny endriky ny fanjanahantany amin’izao fotoana. Mampalahelo fa lasa foto-kevi-dehibe ao anatin’ny propagandin’ny sasany io endrika “fanjanahantany vaovao” io ary atao mihitsy izay haneken’ny saim-bahoaka izany. Teratany vahiny na vazaha avokoa ny ankamaroan’ireo …Tohiny
Novoizina mafy tamin’ny hainoamanjery ny daty omaly, fe-potoana tokony hametrahan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina fialàna, araka ny voalazan’ny lalam-panorenana. Tsy dia tena io fametraham-pialàna io anefa no nandrasan’izy ireo tamin’izany mba ilazana amin’ny vahoaka Malagasy sy ...Tohiny